मारेर हातखुट्टा बाँधेर ४०० फिटको भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किए पछी , शोकाकुल परिवार चकित - Taja Report
Homeबिज्ञान प्रबिधिमारेर हातखुट्टा बाँधेर ४०० फिटको भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किए पछी , शोकाकुल परिवार चकित
मारेर हातखुट्टा बाँधेर ४०० फिटको भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किए पछी , शोकाकुल परिवार चकित
July 10, 2018 बिज्ञान प्रबिधि Comments Off on मारेर हातखुट्टा बाँधेर ४०० फिटको भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किए पछी , शोकाकुल परिवार चकित
एक युवतीसँगको प्रेमको विषयलाई लिएर अन्य ३ युवकले निर्घात कुटपिट गरी हातखुट्टा बाँधेर ४ सय फिट अग्लो भीरबाट फालिएका युवक ५ दिनपछि जिउँदै निस्किएका छन् । उनलाई ती ३ युवकले अपहरण गरेका थिए ।
भारतको इन्दौर शहरका बिएस्सीमा पढिरहेका २० वर्षका युवक मृदुल भल्लालाई अपहरण गरेर ती युवकले ३१ किलोमिटर टाढा लगेर निर्घात कुटपिट गरेपछि हातखुट्टा बाँधेर भीरबाट फालेका थिए ।
उनीहरुले हत्याको नियतले माथिबाट ढुंगा समेत लडाइदिएका थिए । यता घरबाट उनी बेपत्ता भएपछि परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । प्रहरी घटनास्थलमा शंका लागेपछि भीरबाट तल गएको थियो ।
घटनास्थलबाट ४ सय मिटर तल पुग्दा प्रहरीले मृदुलको कपडा देख्यो । ४५ मिनेट लगाएर भीरबाट तल जाँदा प्रहरीले मृदुललाई झरनामा घोल्टो परेर लडेको अवस्थामा भेट्यो ।
प्रहरीले उनलाई पल्टाउँदा उनको मुखबाट हावा निस्कियो । जिउँदै देखेपछि प्रहरीले घटनास्थलमै डाक्टर बोलायो ।दिउँसो १२ बजे उनलाई माथि ल्याएर इन्डेक्स मेडिकल कलेज पु¥याइयो ।
प्रहरीका अनुसार मृदुललाई ७ जनवरीका दिन दिउँसो २ बजे फ्यााकिएको थियो । १२ जनवरीका दिनसम्म त्यस्तो स्थानमा उनलाई जीवितै देखेर डाक्टर पनि चकित परेका छन् । डाक्टरका अनुसार मृदुलका हातखुट्टा चिसोले ककरिएका थिए तर उनको मुटु फोक्सो र कलेजोमा धेरै चोट थिएन । ढुंगाले घाउ भइको भए पनि घोप्टो अवस्थामा नालीमा फस्दा उनको रक्तश्राव रोकियो ।
चिसो भएका कारण घाउका त्यति धेरै संक्रमण पनि हुन पाएन । सास फेर्न पनि कुनै समस्या नभएका कारण उनी जीवितै रहन सके ।घटनाको मुख्य आरोपी २४ वर्षका आकाश रत्नाकर भएको बताइएको छ । आफ्नी प्रेमिकासँग मृदुल नजिकिएको आशंकामा उनले हत्याको प्रयास गरेका थिए ।
उनका साथी २० वर्षका विजय परमार र रोहित भनिने २३ वर्षका पियुष परेतासँग मिलेर आकाशले आफ्नै दाजुको स्विफ्ट कारमा मृदुलको अपहरण गरेका थिए । आकाशले दूधवालाको फोन मागेर मृदुललाई फोन गरेर आफ्नी प्रेमिकाका काका बनेर भेट्न बोलाएका थिए । तीनै जना आरोपी फरार छन् र उनीहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सफल जिवनको लागि अफ्नाउनुस यी १६ वटा सुत्रहरु
जानी राखौँ यी अदभुत १० कुराले गर्दा जसमा पुरुषहरुलाई महिलाले नै जित्छन्
के तपाईंले फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने , हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ!!! (42)